Fandefasana bus na mpanazatra 70 Plazas - Bus Torres
Fivarotana fiara fitaterana sy mpandraharaha 70? Alaharo eo am-pelatananao any Madrid sy Toledo
La raharaham-barotra de fiara fitateram-bahoaka, minibuses, microbus y minivans Izy io no iray amin'ireo lehibe indrindra orinasa de mividy seza 70 izay nahatonga azy ireo hitsidika tsotra tao an-drenivohitra mba handehanana manerana an'i Madrid, Toledo, El Escorial ary Segovia; Raha te hanao fitsidihana ianao dia aza misalasala ary mankanesa any amin'ny orinasan'ny fiara fitaterana any Madrid, Torres Bus.
Aza manary fotoana intsony mitady tolotra hafa Raiso izahay ary hanampy anao mandritra ny ora 24 + 34 607 372 252 na raha tianao ny mandefa anay mailaka info@torresbus.es Manoratra amin'ny antsipiriany ny fitsidihanao izahay mividy seza 70 ary ny mpivarotra antsika dia hiantso anao na hanoratra aminao ny saran'ny dia, fitsidihana na fitsangatsanganana tianao atao.
Ahoana no hanakarantsika ny mpanazatra ny seza 70?
[featured_box title = "Dingana voalohany" img = "https://www.torresbus.es/wp-content/uploads/2016/06/alquiler-taxi-vip-en-madrid.jpg" pos = "center"]
Ny soso-kevitra tsara indrindra avy amintsika Mpanazatra ny seza 70
[Featured_box title = "Dingana Segudo" img = "https://www.torresbus.es/wp-content/uploads/2016/06/precio-alquiler-taxi-vip-lujo-madrid.jpg" pos = "foibe" ]
Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala miantso, dia ananantsika
[Featured_box title = "dingana fahatelo" img = "https://www.torresbus.es/wp-content/uploads/2016/06/alquiler-precio-taxi-lujo-vip-en-madrid.jpg" pos = " center "]
Alefaso aminay ny teti-bolanao raha tsindrio eto ambany teti-bola amin'ny karazana Servicesna izay tianao hataonao amin'ny manofana mpanazatra sy mpanazatra ny seza 70 Madrid.
Ny fampiofanana ho an'ny mpanazatra sy mpanazatra 70 dia mametraka fomba iray hanentanana ny vahiny, ny mpanjifanao, ny fianakaviana
Ankoatry ny fanatanterahana ny fitaterana tsara indrindra amin'ny mpandeha dia manana ireo mpamily mahay ihany koa isika; izay manana ny haavon'ny Anglisy mba hanolotra fanompoam-pivavahana lehibe ho an'ny vahiny mpandeha amintsika, ka hahatonga ny fomba fitantanana bebe kokoa amin'ny karazana mpanjifa rehetra.
Etsy andaniny, ny tsirairay amin'ireo fiara fitaterana dia manana ny teknolojia tsara indrindra sy farany ary ny seza tsara indrindra amin'ny endrika hafa.
Noho izany antony izany dia tsy misalasala ny miantso antsika haingana araka izay tratra ary milaza amin'ny mpivarotra ataontsika miaraka amin'ny antsika fanolorana mpandraharaha 70 ary tsy ho ela dia hifanerasera aminao izahay mba hanome ny tolotra maimaim-poana tsara indrindra ary handraisanao ny filànao tsirairay izay ilainao, hamorona teti-bola tsara indrindra ho an'ny dia ataonareo izahay.
Ny orinasanay Torres bus dia orinasa iray izay hikarakarantsika ny fifindrana avy any Madrid mankany amin'ny sidina, avy amin'ny hotely mankany amin'ny seranam-piaramanidina; Manao sekoly sy hianakaviana koa izahay, fandraisanay raharaham-barotra, fizahan-tany manerana an'i Espana, fitsidihan'i Madrid sy Toledo (eo anelanelan'ny kapitalina hafa) sy zavatra maro hafa izay azonao fantarina raha toa ka ataonao 70 mpanafatra seza hofaina miaraka amin'ny bus Torres bus.
Bisy ho an'ny hofan-trano ao Madrid avy amin'ny kianja 70
Ny pejinay mainty dia www.torresbus.es izay ahitanao ny sambonay manontolo miaraka amin'ny sarin'ny bisy na minibus tsirairay; Fanehoan-kevitra avy amin'ny olona efa nalainay ary raha tianao ny hanoratra ny famerenanao manokana mba hampisehoana amin'ireo mpanjifanao vaovao ny fomba fitsaboana anao ary ny fomba nahafahanao nanompoanao.
Request your 70 mpanafatra seza hofaina Ho an'ny karazana tranga rehetra, izahay dia amin'ny zavatra rehetra ilainareo. Aza mieritreritra bebe kokoa raha te hankafy tsy misy mampiahiahy eto ny orinasa sy ny orinasanao ny fahatokisana. Raha te-handefa mailaka amin'ny fampahalalana momba ny dianao ianao dia tsy maintsy milaza amintsika ireto manaraka ireto:
- Andro fialan-tsasatra sy fialan-tsasatra - Fialana sy famerenana amin'ny laoniny - Toerana misy ny toerana fialana sy toerana; dia asongadino fa ny hetsika dia hatao any amin'ny toerana misy azy Seza mpanazatra 70 fa raha tsy izany, dia ho entina miverina ihany izy; - olona maro ary raha toa ianao hitondra entana na tsia; - nomeraon-telefaona, anaran'olona ary ny anaran'ny olona nangataka ny antsipiriany amin'ny fifandraisana amin'ny mailaka na amin'ny mailaka na antso an-telefaona.
mpanazatra mpanafika antoko 70 plazas madrid orinasa
Fandefasana bus na mpanazatra 70 Plazas - Bus Torres November 14th, 2016Fampiofanana mpampiofana